Nagu saabsan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Kaniisadda Caalamiga ah ee God-ka gaaban ee WKG, Ingiriisiga "Kaniisadda Adduunka ee Ilaah" (oo loo yaqaanay ilaa 3-dii Abriil, 2009 meelo kala duwan oo adduunka ah oo hoos yimaada magaca "Grace Communion International"), waxay ahayd sanadkii 1934-kii Mareykanka oo loo yaqaan "Radio Church of God" Herbert W. Armstrong (1892-1986) ayaa la aasaasey. Maaddaama uu ahaa khabiir hore oo xayeysiis ah oo wacdiye ka dhiga Kaniisadda Ilaah maalintii toddobaad, Armstrong wuxuu hormuud u ahaa wacdinta injiilka isaga oo raadiyayaal ah, laga bilaabo 1968, "Maalinta Berri ee Dunida" ("Dunida Berri"). Joornaalka "The Plain Truth" Magazine, oo sidoo kale la aasaasay Armstrong sanadkii 1934, waxaa sidoo kale lagu daabacay Jarmal ilaa 1961. Marka hore "runta runta" iyo 1973 sida "Cad & Run". Sanadkii 1968 waxaa la aasaasay Jaaliyaddii ugu horreysay ee ku hadasha afka-Jarmalka ee Iswisarland oo ku taal magaalada Zurich, waqti gaaban kadib Basel. Bishii Janaayo 1986, Armstrong wuxuu u magacaabay Joseph W. Tkach inuu noqdo kuxigeenka guud. Ka dib dhimashadii Armstrong (1986) oo hoos yimid Tkach Senior si tartiib ah ...
Adkeynta Ciise Masiix Qiimaheena ayaa ah mabaadiida aasaasiga ah ee aan ku dhisno nolosheena ruuxiga ah iyo tan aan ku wajihi karno aayaha aan wadaagno ee Kaniisadda Adduunyada Ilaah oo ah carruurta Ilaah ee iimaanka xagga Ciise Masiix. Waxaan xooga saareynaa barista kitaabiga ah ee caafimaad qabta Waxaan balanqaadnay barista kitaabiga ah ee caafimaadka qabta. Waxaan aaminsanahay in caqiidooyinka aasaasiga ah ee masiixiga taariikhiga ahi yihiin kuwa diinta masiixiga ...
Cafis naga dhaaf anaga dhaqankeena
Kaniisadda Adduunka ee Ilaah (WKG) (Ingiriis: Grace Communion International ilaa iyo Abriil 3, 2009) waxay mowqifkeedii u beddeshay sannadihii ugu dambeeyay aaminaado iyo dhaqamo badan oo muddo dheer la rumeysan yahay. Isbeddeladaani waxay salka ku hayeen mala awaal ah in badbaadadu ka timaado nimco xagga rumaysadka. In kasta oo aan horay u wacdinay tan, hadana had iyo jeer waxay xidhiidh la leedahay farriinta uu Eebbe ina siiyay ee ku saabsan shaqadeenna in ...
Shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku barakeeyey Kaniisadda Adduunka ee Ilaah koritaanka aan la saadaalin karin xagga fahanka caqiidada iyo dareenka adduunka nagu hareereysan, gaar ahaan Masiixiyiinta kale. Laakiin heerka iyo xawaaraha isbeddelada tan iyo geeridii aasaasihii Herbert W. Armstrong ayaa la yaabay taageerayaasha iyo kooxaha ka soo horjeedaba. Waa lacag in la joojiyo oo la arko waxa aan ...
Herbert W. Armstrong wuxuu dhintey Janaayo 1986 isagoo 93 jir ah. Aasaasaha Kaniisadda Adduunka ee Ilaah wuxuu ahaa nin cajiib ah, oo leh khudbad cajiib ah iyo qaab qoraal ah. Wuxuu ka dhaadhiciyay in kabadan 100.000 oo qof tarjumaadiisa Kitaabka Quduuska ah wuxuuna dhisey Kaniisadda Dunida oo dhan ee Godka idaacadda / telefishanka iyo Boqortooyada daabicidda oo gaartay ugu badnaan 15 milyan oo qof sanadkii. Adkeyn xoog leh xagga waxbarista Mr. ...
Maalmahan dambe badanaa waa kiiska inaad magac u sameysatid naftaada si aad muhiim ugu noqoto dadka kale iyo naftaada. Waxay umuuqataa in dadku ay ku jiraan raadis aan la qiyaasi karin oo ku saabsan aqoonsiga iyo macnaha. Laakiin Ciise mar hore ayuu yidhi: Ku alla kii naftiisa helaa waa lumin doonaa, laakiin kan lumiya ayaa badbaadin doona. oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa (Mt 10:39). Kaniisad ahaan, waxaan ka baranay runtaan. Ilaa iyo 2009 waxaan isku magacawnaa nimcada nimcada ...
Saddexmidnimo, fiqiga udub dhexaadka u ah Masiixa
Hadafka Kaniisadda Dunida ee Ilaah (WKG) waa in lala shaqeeyo Ciise inuu noolaado oo injiilka ku wacdiyo. Fahamkeenna Ciise iyo warkiisa wanaagsan ee nimcadiisa ayaa aasaas ahaan loo beddelay iyada oo loo marayo dib-u-habayn xagga waxbaristeenna ah tobankii sano ee u dambaysay qarnigii 20-aad. Tani waxay horseeday caqiidooyinka jira ee WKG ee hadda lagu dabaqi karo caqiidooyinka kitaabiga ah ee Christian-oday-dhaqameedka ...